Leenca Gurraacha: Xaayyaarota seena qabeessa Oromiyaan dagatte - BBC News Afaan Oromoo
Hafteen xiyyaarota Xaaliyaanii garee loltoota Itoophiyaa Leenca Gurraacha (Black Lion) jedhamanin bara 1936 gubatan aanaa Waayyuu Tuqaa ganda Bonayyaa Moloo keessatti gatamanii argamu.
"Dirree injifannoo Bonayyaa jechuun kan dhiigni guddaan itti dhangala'e, kan namni hedduun itti du'ee fi Xaaliyaanin kan itti injifatame dha."
"Haa ta'u malee namni haftee xayyaaraa kanaaf xiyyeeffannoo kenneefillee hin jiru" jedha dargaggoo Faqqadaa Wanjaa.
Dirreen Bonayyaa Moloo godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa keessatti argamu buufata loltoota Xaaliyaanii akka ture himama.
Dirreen kun iddoo Xaaliyaanin ajajoota waraanaashee itti dhabde fi kan xayyaarawwan ishee sadi garee Leenca Gurraacha (Black Lion) jedhamanin itti gubatani dha.
Haa ta'uu malee dirreen Bonayyaa Moloo yeroo ammaatti caccabaa xayyaarota Xaaliyaanii muraasa qabatee iddoo oolmaa loonii harka namoota dhuunfaa keessatti argamu ta'eera.
Harki caalmaan haftee xayyaarotaas jiraattota naannichaan albee fi maarashaa dabalatee meeshaalee manaa garaagaraa hojjechuuf fudhatamaniiru jedhu namootni BBC'n haasofsiise.
Qaamoleen xayyaaraa muraasni hafanis eegumsa tokko malee dirree itti gubatan irratti gatamanii argamu.
Garee Leenca Gurraacha
Bara 1936 yeroo lolli farra Xaaliyaanii itti cime loltoonni maqaa Leenca Gurraacha jedhuun gurmaa'an loltoota Xaaliyaanii magaala fi baadiyaatti loluuf walitti dhufan.
Gareen kun hayyuulee dargaggeeyyii dhaabbilee barnoota olaanoo fi kollejjii waraanaa Holotaa irraa kan ijaarrame akka ta'e ragaalen seenaa himu.
Gochaalee gurguddoo gareen kun loltoota Xaaliyaanii irratti raawwate keessaa tokko immoo haleellaa xayyaaroota Xaaliyaanii godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaa qubatanii turan irratti fudhate dha.
Halkan waxabajjii 26 bara 1936 gareen Leenca Gurraachaa xayyaaroota Xaaliyaanii magaala Naqamtee irraa fageenya kilomeetira 28 irratti dirree Bonayyaa Moloo irra qubatanii turan sadi ibidda itti qabsiisuun guban.
Loltootni Xaaliyaanii sadarkaa hooggansaarra turan kudha lamas ni ajjeefaman.
Gochaa miseensoota garee Leenca Gurraacha kanarraa kan ka'e Xaaliyaaniin magaala Naqamtee irratti boombii roobsite. Jiraattotni magaala Naqamtee heddus ajjeefaman.
"Xaaliyaanonni caccabaa xayyaaraa kana daawwatan rifeensa mataa isaanitu dhaabbata" jedhu bulchaan god-hambaa Wallaggaa obbo Galataa Teessoo.
Gootummaan loltoota Leenca Gurraachaa mootummaa biyyattin dagatameera kan jedhan jiraattotni ganda Bonayyaa Muloo mootummaan naannoos ta'e federaalaa hambaa kanaaf eegumsi akka taasifamu fi wanti ittin yaadatamu akka ijaarramu gaafatu.
"Namootni as dhufanii waa'ee dirree kanaa maal beektu jedhanii nu gaafatu malee wanti hojjetamee seenaan dhaloota boruf yaa darbu jedhame hin jiru" kan jedhu jiraataan ganda Bonayyaa Moloo dargaggoo Faqqadaa Wanjaa.
Seenaan naannichaa xiyyeeffannoo argachuu dhabuunsaa akka isa gaddisiisu hima.
"Yeroo sanatti xayyaara gubuun isaanii biyya isaaniif waan quuqaman fi miidhaa isaanirra gahaa tureefi" kan jedhan jiraataan ganda Bonayyaa Muloo inni biraan obbo Beekumaa Tafarraa "seenaan lafa kanaa dhokfamee hafeera" jedhu.
Itti gaafatamtuun waajjira aadaaf tuurizimii godina Wallagga Bahaa adde Achaamyalash Fayyisaa gama isaaniitin dirree Bonayyaa Moloo namoota muraasaan kara seeraan ala ta'een fudhatame deebisiisuuf mana murtiitti falmaa jirra jedhan.